रुसी आक्रमण जारी, युक्रेनको राजधानीमा भीषण सङ्घर्ष, नेपाली कुन अवस्थामा छन् ? — Imandarmedia.com
रुसी आक्रमण जारी, युक्रेनको राजधानीमा भीषण सङ्घर्ष, नेपाली कुन अवस्थामा छन् ?
एजेन्सी। किएभतिर अघि बढेको रुसी सेनालाई युक्रेनको प्रतिरोध राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा रुसी सेनाले चार करोड जनसङ्ख्या भएको युक्रेनमा विभिन्न दिशाबाट ठूलो आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेन सरकारले राजधानी किएभका चोकहरूमा लडाइँ जारी रहेको बताएको छ
रुसी फौज किएभ नजिकै आइपुग्दा युक्रेनले प्रतिरोध गरिरहेको जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राति आफूलाई पक्राउ गरेर आफ्नो पक्षका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने रुसी योजना युक्रेनी सुरक्षा बलले विफल बनाइदिएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनबाट उनलाई उद्धार गर्ने वाशिङ्टनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
युक्रेनका स्वास्थ्यमन्त्रीले रुसले आक्रमण गरेपछि अहिलेसम्म १९८ जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्।
पोल्यान्डले विश्वकप २०२२ का लागि रुससँग प्लेअफ खेलमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ। यूकेका सशस्त्र बलसम्बन्धी मन्त्री जेम्स हिपीले यूके र अन्य २५ देशहरूले युक्रेनलाई थप ‘मानवीय सहायता वा सैनिक सहयोग’ उपलब्ध गराउने सहमति गरेको जनाएका छन्।
रुसी आक्रमणविरुद्ध लडिरहेको युक्रेनका लागि पश्चिमा देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउने बताइरहँदा फ्रान्सले किएभलाई हतियार र अन्य सामाग्री पठाइरहेको छ।
फ्रान्सको जलसेनाले रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग जाँदै गरेको मालवाहक पानीजहाज इङ्लिश च्यानलमा रोकेको बीबीसीले थाहा पाएको छ। रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा अलपत्र परेका आफ्ना सयौँ नागरिकको उद्धारका लागि भारतले एउटा विमान पठाएको छ।
किएभको जुलीयानी विमानस्थल नजिकै क्षेप्यास्त्रका कारण क्षति पुगेको एउटा अपार्टमेन्ट भवनका थप तस्बिरहरू बाहिर आएका छन्।
युक्रेनले आक्रमणमा सम्मिलित ३,५०० भन्दा बढी रुसी सैनिकको मृत्यु भएको र झन्डै २०० जनालाई बन्दी बनाइएको दाबी गरेको छ।
रुसले आक्रमण गरेको तेस्रो दिन युक्रेनको राजधानी किएभमा विस्फोटन भएका विवरणहरू आइरहेका छन् भने युक्रेनका विभिन्न ठाउँमा भीषण सङ्घर्ष भइरहेको छ। राजधानीमा मैदान स्क्वाएरनजिकै एउटा शक्तिशाली विस्फोटनको आवाज सुनिएको छ।
भने ट्रोइयस्चना क्षेत्रमा एउटाभन्दा बढी विस्फोटन भएका विवरण आएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार किएभमा गरिएका बमबारीको आवाज सहरको मध्यभागबाट कोसो टाढासम्म सुन्न सकिन्छ।
किएभ इन्डिपेन्डन्टका अनुसार सहरको चिडियाखाना र सुलियाभ्कानजिकै अवस्थित एउटा क्षेत्रबाट ५० वटाभन्दा बढी विस्फोटनहरू सुनिएको छ र मशीनगनबाट गोली प्रहार भइरहेको सुनिन्छ।
फक्स न्यूजका एक संवाददाताका अनुसार राजधानीमा अहिले एकभन्दा बढी दिशाबाट आक्रमण भइरहेको छ। ट्रोइयस्चना जिल्लाको सीएचपी-सिक्स ऊर्जा केन्द्रनजिकै लडाइँ भइरहेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ।
सहरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिने उद्देश्यले उक्त आक्रमण गरिएको हुनसक्ने ठानिएको छ। पिरिमोही एभिन्यूमा क्षतिग्रस्त गाडीसँग आगो बलिरहेका दृश्यहरू देखिएका छन्।
भ्यासीलकिभनजिकै रहेको एउटा हवाईअड्डामा पनि भीषण सङ्घर्ष भएको विवरण आएको छ। पाराट्रूपरहरूले उक्त क्षेत्रलाई किएभमा आक्रमण गर्न योजना बनाउने स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको ठानिएको छ।
युक्रेनी सैनिकहरूले रुसीहरूलाई ब्ल्याक सीमा अवस्थित मिकोलिएभ सहरबाट पछाडि धकेलिदिएको दाबी गरेका छन्। युक्रेनी सेनाले आफ्नो फेसबुक पेजमा शनिवार किएभस्थित सैनिक अड्डाले रुसी फौजको आक्रमणको आफूले प्रतिरोध गरेको जनाएको छ।
बीबीसीले पुष्टि गर्न नसकेको उक्त हमला पिरिमोही एभिन्यूमा भएको ठानिएको छ।अमेरिकी अर्थमन्त्रालयद्वारा पुटिनमाथि प्रतिबन्ध: अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले औपचारिक रूपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोफविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ।
उसले लाभ्रोफलाई पुटिनका प्रमुख प्रचारक भनेको छ। विदेशी सरकार प्रमुखलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउनु दुर्लभ घटना हो र यो युरोपेली सङ्घ, यूके र क्यानडाले गरेका निर्णयपछि आएको छ।
प्रतिबन्ध सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, राष्ट्रपति पुटिन किम जङ-अन, एलेक्सेन्डर लुकासेन्को र बसर अल असदजस्ता तानाशाह सम्मिलित एउटा सानो समूहमा परेका छन्।
रुसी सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्यहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले शान्तिका लागि अर्को प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भिटो शक्ति भएको रुस परिषद्को स्थायी सदस्य रहेकाले उक्त प्रस्ताव विफल हुने निश्चित थियो। राष्ट्रसङ्घ युद्धपछि लडाइँलाई अन्त्य गर्न जन्मिएको थियो। आज त्यो उद्देश्य हासिल भएन। तर हामीले प्रयास छाड्नु हुन्न।
हामीले शान्तिका लागि अर्को प्रयास गर्नैपर्छ, उनले ट्वीट गरेका छन्। त्यसलगत्तै उनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका रुसी फौजहरूलाई ब्यारेकमा फर्किन आग्रह गरेका थिए।
युक्रेन-रुस तनाव: युक्रेनमा नेपाली विद्यार्थी कुन अवस्थामा छन्रु सले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि सङ्कटमा परेका छन्। किएभमा रहेका तीन नेपालीले आफूलाई के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
किएभको एउटा छात्रावासमा रहेका निशा कुँवर, कल्पना तामाङ र विशाल गुरुङसँग बीबीसी न्यूज नेपालीकी सृजना श्रेष्ठले कुराकानी गरेर बनाएको भिडिओ सार्बजनिक भएको छ। बीबीसीको सहयोगमा।